MURAAYADDA WAAYAHA (Q. 2) “Qormooyin toddobaadle ah oo lafaguraya duruufaha nololeed iyo xaaladaha taagan” W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
MURAAYADDA WAAYAHA (Q. 2) “Qormooyin toddobaadle ah oo lafaguraya duruufaha nololeed iyo xaaladaha taagan” W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
Marka arrintu tahay kuurgal, baadhis, deraasad iyo xogururin; looga gol leeyahay talooyin lagu meelmaro oo dhibaato jirta maare u noqda, sinnaba ugama fursan karto xeeldheerayaal ku talaxtagay oo takhasusaad aqooneed u leh qaddiyadda la xallilayo. Marka se aad arrintaa u xilsaarto xubno aanad aqoon ugu xilan, sow ma cadda inaad dadka u qaadayso ‘shinbirayahow heesa?’ Sow ma cadda in xaalkaagu yahay ‘qawda maqashii waxna ha u qaban?’Haddii aad in uun dhaaddan tahay daawaha kulul ee shacabkaagu saaran yahay iyo sida noloshoodu uga sii darayso maalinba maalinta ka dambaysa, ilama aha in xaal sidan noqon lahaa. Hadday se ku sii socoto, waan hubaa in marka ay xammili waayaan dacdarrooyinka nololeed ay godkaaga kuugu soo gali doonaan. Waxa soo socdaa yaab leh.